Maitiro ekutumira nziyo kana kusevha inogamuchirwa kubva kuWhatsApp | IPhone nhau
Paul Aparicio | | IPhone maapplication, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kubva nezuro tinokwanisa kutumira nekutambira magwaro neWhatsApp pasina chikonzero chekuti vave PDF kana kuda kuchinjira kune iyo fomati. Nekuda kweichi chitsva, tinogona kutumira Izwi, Excel, PowerPoint kana zvinyorwa zvemavara. Uye kwete izvo chete, asi isu tinokwanisa zvakare kutumira nziyo, chimwe chinhu icho ini, ini, ndagara ndichishandisa Native Music application, ndisati ndamboita. Iwe unoda kuziva sei tumira nekutora nziyo dzakagamuchirwa paWhatsApp? Zvakanaka, ramba uchiverenga.
Chekutanga pane zvese ndinoda kutaura kuti ndamboita kakutsvagurudza uye ndikaona kuti nziyo dzinogona kutumirwa kuburikidza neWhatsApp kwenguva yakareba, asi uchishandisa zvimwe zvinoshandiswa uye nenzira dzinodhura. Pano isu tiri kuenda zvakare kukudzidzisa iwe kuti ungavatuma sei vachishandisa chechitatu-bato kunyorera, asi ikozvino zvese zviri nyore. Tiri kuenda zvakare kukuratidza kuti sei uvaponese pane yako iPhone kukwanisa kuzvibereka zvakare kunyangwe ukadzima chat pawakavatambira. Iwe une ruzivo rwese pazasi.
1 Maitiro ekutumira nziyo neWhatsApp
1.1 Ine Workflow (yakabhadharwa)
1.2 NdiMagwaro 5 (mahara)
1.3 Kubva kune zvimwe zvinoshandiswa
2 Sei kurodha nziyo dzakagamuchirwa neWhatsApp
Maitiro ekutumira nziyo neWhatsApp
Ine Workflow (yakabhadharwa)
tuma nziyo mu .mp3 kana m4a (mamwe mafomati andisati ndaedza) zviri nyore kwazvo. Chinhu chekutanga chatinoda kuve nenziyo pane saiti inotibvumidza kugovana iyi mhando yezvinyorwa, senge yemahara VLC application. Asi pane chishandiso chinotibvumidza kuti tiite zvese uye ini ndichagara ndichikurudzira kutenga kwako. Uku ndiko Kufamba kwebasa, kubva patinogona zvakare kudzoreredza nziyo dzatinadzo mukuzvarwa kweMusic application. Maitiro ekutumira nziyo neWhatsApp uchishandisa Workflow ndeinotevera:
Zvine musoro, kana tisina Workflow yakaiswa, tinoenda kuApp Store uye nekuiisa. Unogona kuitora kubva IZVI ZVINONZI.
Iye zvino iwe uchazoda kufambiswa kwebasa kuti ubvise nziyo kubva kunyorera mimhanzi uye utumire Ini ndakagadzira imwe yauinayo mu IZVI ZVINONZI. Iwe unofanirwa kurivhura muKufamba kweBasa.
Nechishandiso chakaiswa uye kubuda kwebasa kurodha pasi, isu tinovhura Workflow uye tinotanga Send Music Music kufambisa.
Zviri nyore kushandisa: isu tinongofanirwa kutsvaga rwiyo kana nziyo dzatinoda kutumira nekutambira.
Nhanho yekupedzisira yekufambiswa kwebasa uye yeiyi nzira kugovana, izvo zvichatibvumidza kutumira rwiyo naWhatsApp nedzimwe nzira.
NdiMagwaro 5 (mahara)
Sarudzo iri nyore senge yapfuura asi izvo zvingave zvirinani nekuti ndezvemahara ndezvekutumira nziyo tichishandisa chikumbiro cheMagwaro 5. Iyi nzira yakapusa uye tichazongoita zvinotevera:
Tinodhawunirodha Zvinyorwa 5 kana tisina kuzviisa (download).
Zvine musoro, isu tave kuvhura Magwaro 5.
Isu tinovhura «iPod Music Library».
Iye zvino tinobata «Rongedza».
Tinosarudza nziyo dzatinoda kutumira.
Isu tinobata pa «Vhura mu».
Chekupedzisira, tinosarudza "WhatsApp" uyezve wekubata watinoda kutumira rwiyo.
Kubva kune zvimwe zvinoshandiswa
Kana isu tiine rwiyo muVLC kana imwe multimedia application, tinogona kukupa iwe zvakananga kugovana uye sarudza WhatsApp. Asi zvinoita sekunge zvinonakidza kwandiri kuti ndikwanise kutumira aya atinawo pane yedu iPhone. Kana iyo multimedia application patinenge tiine rwiyo ine share chikamu chinowanikwa (
) asi haititenderi kuti titumire neWhatsApp, yatinogona kushandisa IZVI ZVINOSHANDA. Iyo yakapusa pane zvese, nekuti yakafanana neMac Preview, muoni wamarudzi ese ezvinyorwa, asi kubva pairi isu tine simba rekugovana rine simba rinotibvumira kutumira nziyo neWhatsApp.
Sei kurodha nziyo dzakagamuchirwa neWhatsApp
Chinhu chakashata nezvekuona nziyo paWhatsApp ndechekuti haigone kutorwa pasi. Aihwa? Kwete zvishoma. Pane hunyengeri hunotibatsira chengetedza WhatsApp odhiyo. Iyi inotevera nzira haisi iyo inokwezva uye ndinofungidzira kuti mune ramangwana hazvizove zvakakosha kutora yakawanda nzira, asi inoshanda. Tichazviita nekutevera matanho aya:
Tinotamba takabatirira parwiyo rwakatambirwa neWhatsApp. Tichaona kuti iyo "Resend" sarudzo inoonekwa.
Tinobaya pamusoro «Kutumira zvakare».
Iye zvino tinobata pane yekugovana icon (
Kubva pane sarudzo dzinoonekwa, tinosarudza «Wedzera kumanotsi».
Tinogamuchira katsamba, hapana chikonzero chekutumidza zita.
Iye zvino isu tinovhura iyo manyorerwo application uye tinowana iyo yakagadzirwa tsamba.
Tinotamba takabatirira parwiyo.
Kubva pane sarudzo dzinoonekwa, tinosarudza «Goverana».
Iye zvino tinofanirwa kutora pa «Kurumidza Kuona».
Isu tinobata zvakare pane share icon (
Uye pakupedzisira, isu tinochengeta rwiyo mune inoenderana application. Ini ndaizoichengeta muVLC.
Sezvo zvavanotiudza mune zvakataurwa, asi ini ndakasarudza kuwedzera yechinyakare uye yemahara sarudzo pano, kana iwe uine Workflow isu tinokwanisa zvakare kumhanyisa Preview Workflow (Kurumidza Kutarisa) kuichengeta chero kupi. Isu tinogona zvakare kutanga kumwe kubuda kwemabasa, izvi zvatova pakudya kwemutengi.
Sezvauri kuona, haisi nzira ine nhanho shoma, asi inoshanda uye inogadzirisa kusahadzika kwe aripi WhatsApp ma audios akachengetedzwa pa iPhone. Chinhu chakashata ndechekuti rwiyo rwunotumirwa uye ponesa nezita rakareba kwazvo, asi zvinoshandiswa seVLC zvinokutendera kuti utumidze zita faira. Iwe unofungei nezve idzi nzira dzekutumira nekuchengetedza nziyo kubva kuWhatsApp?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutumira nziyo kana kusevha akagamuchirwa kubva kuWhatsApp
Zvinonakidza ... Pane here imwe nzira asi yemahara?
Mhoro, Asingazivikanwe. Iwe unoreva kuvatumira? Sezvandiri kuratidza, chakakosha chinhu kuva navo muchikumbiro icho chine mugove wekuwedzera. Semuenzaniso, unogona kutumira rwiyo kubva kuVLC kubva pane bhatani rekugovana.
Kana iwe uchida kutumira izvo kubva kune yako reel, iwe unogona kuyedza iZip (ine yemahara vhezheni) iyo inogona kuwana iyo mimhanzi raibhurari. Ini ndichaiongorora uye ndowedzera ruzivo.
Hora: aiwa, iZip haishande kana isiri iyo neiyo Pro vhezheni.Ndichaona kana ndikawana chero chimwe chirongwa chinokwanisa kuwana nziyo muraibhurari.
Hora 2: Zvinyorwa 5 zvinotendera. Ini ndinoiwedzera iyo posvo.
Jesu jaime gamez akadaro
Pave paine Anwendung kwenguva yakati iyo inoshanda seye browser ne memory memory yekuchengetedza nziyo dzakadzokororwa.Ndanga ndichizvishandisa kubva pakupera kweiyo iPhone 5s, inonzi idownloader, zvakanaka kuyedza
Pindura kuna Jesu jaime gamez
Iwe unogona zvakare kudzoreredza bhokisi pamwe nekufambiswa kwebasa pane kupa manotsi iwe unopa run worflow uye kana iwe uine recipe iwe unowana sarudzo yekuidhonza uye kuichengeta chero kwaunoda
Pindura kune Chimwe Chinhu
chimwe chinhu, iwe unayo iyo nzira yekurodha pasi uye chengetedza chero kwaunoda?
Mhoro marcos. Kana iwe uine iyo Workflow application, ini ndawedzera chinongedzo kuPreview. Icho chiwedzero chinotangwa kubva kubhatani rekugovana. Kana iwe ukaipa kuti igovane kubva paWhatsApp, sarudza "Run Workflowflow" uye sarudza Ratidza, iwe unozogona kuona iyo faira, asi chinokufadza ndechekuti kana ukabaya bhatani rezvekugovana zvakare, unozogona kuita chero chaunoda nayo, sekuichengeta muVLC, muDropbox ...
Ndinacho, asi ndinozvipfuudza sei kwauri?
Pablo Nyanzvi akadaro
Ini ndaida kukuudza kuti ndinoda post yako. Yakarurama, yakatendeseka uye inobatsira. Kufamba kwebasa ndiko kwaive kuita kuti ndiite kusimudzira kuenda kuIOS 8 neyangu yazvino iPhone 4s (iyo ichiri kunetseka neIOS 9.3). Akange asina kuwana yakawanda yekutarisa kubva mairi senge neiyi hova mbiri. Shuwiro yakanakisa.
Pindura kuna Pablo Mathematician
Kana iyo sarudzo pane yangu iphone yekuwedzera kune manotsi ikasabuda, ndinozviita sei?
Pindura kune nyika
Mhoro kana ini ndichipinda mumhanzi raibhurari yeangu iPhone kuburikidza neMagwaro 5 ini handiwani sarudzo yekugadzirisa, ndosaka. (Ndine iphone 5s)
Kutenda kwakawanda, ndakangoishandisa uye zvakandibatsira zvakanyanya